ခရီးသွားအရင်းအမြစ်များ - ဟိုတယ်များကိုဘွတ်ကင်၊
သငျသညျများမှာ ခရီးစဉ်စီစဉ်နေသည် မင်းအကူအညီလိုလား။ ထိုအခါဤ website သည်သင်ရှာဖွေနေသောအတိအကျဖြစ်သည်။ On မင်္ဂလာပါ ကမ္ဘာပေါ်ရှိအဓိကခရီးသွား about ည့်သည်များနှင့်ပတ်သက်သောအကောင်းဆုံးသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည်။ နေ့စဉ်ဆောင်းပါးတွေနဲ့အတူဆောင်းပါးတွေထုတ်တယ် ခရီးသွားလာရေးအကြံပေးချက်များသင်မလွတ်နိုင်သောနေရာများ၊ အကောင်းဆုံးကမ်းခြေများ၊ မယုံနိုင်လောက်အောင်သဘာဝ၊ အကောင်းဆုံး gastronomy နှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်။
သငျသညျသောလုံခြုံခရီးစဉ်ပြင်ဆင်နေလျှင်လည်း သင်ဟိုတယ်တွေဘွတ်ကင်လုပ်ဖို့အကူအညီလိုတယ်လေယာဉ်ပျံများရှာဖွေခြင်း၊ အငှားကားတစ်စီးငှားရမ်းခြင်းနှင့်ဤအရာအားလုံးကိုစျေးကွက်အာမခံချက်အားလုံးနှင့်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ရနိုင်သည်။ တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ? ကောင်းပြီ၊ ဒီမှာငါတို့လည်းမင်းကိုကူညီနိုင်မယ်။ အောက်ဖော်ပြပါရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကို သုံး၍ ဈေးအသက်သာဆုံးနှင့်သင်၏အားလပ်ရက်များကိုပျော်ရွှင်ရန်သာစိုးရိမ်ပါ။
ဒီမှာတွေ့လိမ့်မယ် အကောင်းဆုံးဟိုတယ်ကမ်းလှမ်းချက်။ သင်၏ဟိုတယ်ကိုအကောင်းဆုံးအခြေအနေ၊ မိနစ်အနည်းငယ်နှင့်အာမခံချက်များအားလုံးဖြင့်ရှာဖွေပါ။
အဓိကအချက်များအနက်မှတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့သည်အားလပ်ရက်များ၌တည်းခို။ အနားယူနိုင်သောဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအတွက်, အကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ခြင်းကဲ့သို့အဘယ်အရာကိုမျှ စျေးပေါဟိုတယ်များ သောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ဟုသင်ထင်သော်လည်းဟိုတယ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နှင့်၎င်းသည်မခက်ခဲပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပျောက်ဆုံးလိုသည့်နေရာကိုရက်အနည်းငယ်သာစဉ်းစားရမည်။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိပြီဆိုရင်ရှာဖွေရေးဘားမှာရေးမယ်။ သူ့နောက်မှကျန်ရှိနေသေးသောအရာများသည်ကျွန်ုပ်တို့အနားယူမည့်အချိန်နှင့်နေ့ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ပြက္ခဒိန်မည်သို့ပြသမည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ရက်ကိုရွေးချယ်ရန် ပို၍ ပင်လွယ်ကူလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်သင့်တွင်လူအရေအတွက်ကိုသာရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။
ဖြည့်ပြီးတာနဲ့သူတို့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်ပရိုမိုးရှင်း ရွေးချယ်ထားinရိယာထဲမှာဟိုတယ်များ၏။ ထို့အပြင်၊ အားလုံးပါ ၀ င်နိုင်သောဟိုတယ်များသို့မဟုတ်မနက်စာပေးသောသူများကဲ့သို့နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောရွေးချယ်စရာများကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အခုသင်ကြိုက်နှစ်သက်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးပြီးဒီမတူညီတဲ့ရွေးချယ်စရာတွေထဲကတစ်ခုကိုရွေးပါ။ အကယ်စင်စစ်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်!
သင်သွားသည့်နေရာကိုသွားပါ အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနဲ့သင့်အတွက်လေယာဉ်စီးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကို သုံး၍ သင်၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုအာမခံချက်အပြည့်ဖြင့်နှင့်အလွန်သက်သာစွာဖြင့်ရယူပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သွားမည့်နေရာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့တည်းခိုနိုင်သောဟိုတယ်ကိုပင်ရွေးပြီးပါကလေယာဉ်ခရီးစဉ်များရရှိနိုင်မှုကိုစစ်ဆေးရပါမည်။ သင်ရှင်းပြရုံထက် ပို၍ ရှုပ်ထွေးစရာမလိုတော့ပါ။ တူညီသောစာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည် လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ။ ကြီးစွာသောအားသာချက်များကိုရွေးချယ်ရန်နှင့်သူတို့ကိုသင်ရရှိနိုင်စေရန်အရာအားလုံးရှိသည်သော tool တစ်ခု။
လေယာဉ်စီးချိန်တွင်ဘတ်ဂျက်၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဆုံးရှုံးသည်ဟုထင်မြင်သူများစွာရှိသည်။ ငါတို့အားလုံးမှာအားလပ်ရက်ကြီးကြီးမားမားဘတ်ဂျက်မရှိဘူး၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကောင်းတစ်ခုကြောင့်သင့်အတွက်လေယာဉ်အပေးအယူများကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်၎င်းတို့ကိုကမ်းလှမ်းသောကုမ္ပဏီများပေါ်လာလိမ့်မည်။ တူညီသောနည်းအတိုင်းပင်ရင်းကိုရည်ညွှန်းမည်ဖြစ်ပြီး ဦး တည်ရာနှင့်တူညီသောကြာချိန်ကိုလည်းဖော်ပြလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတွင်အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိပါကရှင်းလင်းစွာဖော်ပြလိမ့်မည်။ သင်သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွင်တောင်းဆိုထားသောကွက်လပ်များကိုဖြည့်ပြီးသည်နှင့်သင်၏အာမခံချက်အားလုံးကိုရရှိနိုင်ပြီးအံ့မခန်းဖွယ်စျေးနှုန်းများဖြင့်သင့်အားရရှိလိမ့်မည်။
ရှာပါ သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်အကိုက်ညီဆုံးသောငှားရမ်းကား သင့်ရဲ့ ဦး တည်ရာကိုမြို့၌တည်၏။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အကြီးဆုံးကမ်းလှမ်းချက်ရှိသည် ကားငှားရမ်းခြင်း လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်နှင့်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများမှာ။
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ကားကိုမယူလိုပါကအဆင်ပြေစွာသွားလိုသည့်နေရာသို့သွားလိုလျှင်၊ အငှားကားများကိုလည်းရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင်လူကိုမေးမြန်းစရာမလိုဘဲသင်ဆင်းသက်တဲ့အခါမှာမှန်ကန်ဖို့လိုပါတယ်။ ငှားရမ်းထားသောကားရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုမမေ့ပါနှင့်။
၎င်းတွင်ကြီးမားသောကုမ္ပဏီကြီးအားလုံးကိုသင်အဆင်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့အပြင်အွန်လိုင်းတွင်သင်စာအုပ်ဝယ်သောအခါအထူးလျှော့စျေးများမှအကျိုးရနိုင်သည်။ ဘယ်တော့မှမနာကျင်ဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်, အငှားကားတစ်စီးကြိုတင်မှာကြားထား၏နောက်ထပ်အားသာချက်သင်သည်သင်၏ကြိုတင်မှာကြားထားကိုစီမံခန့်ခွဲသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ၎င်းကိုသင်ပြုပြင်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်နိုင်သည်။
အလွန်ရိုးရှင်းသောအဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင် search engine မှတစ်ဆင့်သင်သိရန်လိုသည် ကားတစ်စီးစီမှာစျေးနှုန်းရှိတယ်။ ၎င်းကိုသင်ရရှိနိုင်မည့်စာမျက်နှာတိုင်းတွင်အပြည့်အဝရှင်းပြလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကားအမျိုးအစားနှင့်တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့ငှားရမ်းသည့်နေရာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ထို့ကြောင့် Renault Clíoသို့မဟုတ် Citroen C1 သို့မဟုတ် C4 သည်စျေးအသက်သာဆုံးရွေးချယ်မှုများဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါတို့ပြောတဲ့အတိုင်း၊ သင်အမြဲတမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်တိုင်းကိုကြည့်ပြီးအခြေအနေများကိုကောင်းစွာဖတ်ရှုရမည်။
သင်တတ်နိုင်သမျှစာအုပ်ယူပါ ကြိုတင်ပြီး။ ရာသီဥတုအမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်းများသည်စျေးနှုန်းများကိုပိုမိုမြင့်မားစေကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ကောင်းစွာသိထားကြသည်။ အချို့သောကုမ္ပဏီများသည်ယာဉ်မောင်းသည်အသက် ၂၅ နှစ်အောက်ရှိရမည်ဖြစ်သော်လည်းအချို့သောအပိုဝန်ဆောင်ခများကိုထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်သည်။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုတွေ့သည်အတိုင်းသင်သည်အမြဲတမ်းဓာတ်ငွေ့တိုင်မှထွက်ခွာရန်ရှိသည်သတိရပါ။ ထို့ကြောင့်၊ ဖြစ်နိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြည့်အဝ / အပြည့်တင်သွင်းသည့်စနစ်ပေါ်အခြေခံသည့်မူဝါဒတစ်ခုကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အံ့အားသင့်စရာများကိုရှောင်ရှားနိုင်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကိုက်ညီသည့်ဓာတ်ဆီကိုကျွန်ုပ်တို့ပြည့်ပြည့်ဝဝထားရှိသရွေ့ဖြည့်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်နိုင်ငံခြားသို့ခရီးထွက်မည်ဆိုပါကမည်သည့်ပြkindနာမျိုးကိုမဆိုရှောင်ရှားလိုပါကခရီးသွားအာမခံကိုထုတ်ယူခြင်းသည်အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပံ့ပိုးပေး IATI အာမခံ သင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီအကျယ်ဆုံးခရီးသွားအာမခံကိုပေးသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်သင်၏အာမခံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းအတွက်သင်သည်ပုံမှန်နှုန်းထားများနှင့်အညီ ၅% လျှော့စျေးရရှိမည်ဖြစ်သည်။
« Calculate budget »ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ ပြီးနောက်သင်ပြီးပါပြီ
ဤအချက်မှာဤကိရိယာသည်သင့်ခရီးစဉ်အတွက်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများဖြင့်ရရှိနိုင်သောထုတ်ကုန်များစာရင်းတစ်ခုလုံးကိုသင့်အားပေးသည်။ သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည့်အရာကိုရွေးချယ်ပြီး၎င်းကိုငှားရန်သင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြည့်ပါ။ သင်အာမခံထားပြီးပြီ။
ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ သင်၏ခရီးသွားအာမခံကို ၅% လျှော့စျေးဖြင့်ဘွတ်ကင်လုပ်ရန်
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးနေရာတစ်ခုမှာပြင်သစ်ဖြစ်သည်။ အဲဒါအတွင်းမှာပါ ပထမနေရာတစ်ထုတ်ဝေလေ့လာမှုအရသိရသည်။ ဒီနေရာမှာလူပေါင်း ၈၅ သန်းလောက်ဟာဒီနေရာကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာပါ၊ ဒါ့အပြင်ဒီဟာကိုနည်းနည်းလေးမှမဟုတ်တာလို့ပြောရမယ်။ ပြင်သစ်၌ဆွဲဆောင်မှုများစွာရှိသည်။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များသည် Eiffel Tower ကိုမဖြစ်မနေကြည့်ရှုရမည့်နေရာတစ်ခုအဖြစ်ရွေးချယ်ကြသည်။ အချို့က၎င်းကိုတက်ဝံ့ကြပြီးအချို့ကမူအပြင်ဘက်မှအထူးသဖြင့်နေဝင်ချိန်တွင်စဉ်းစားကြသည်။
ရှည်လျားသောလိုင်းများနေသော်လည်း Louvre လည်းမဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ငါတို့သည်လည်း Notre Dame ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအကြောင်းပြောဆိုရန်ရှိသည်တစ်ခုခု။ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုသို့သွားရောက်ရန်လည်းမမေ့သင့်ပါ၊ သို့သော်ဤဒေသတွင်လူတိုင်းတွင်ဤအစက်အပြောက်များရှိသည်။ Mont Saint Michel သည်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတစ်ခုနှင့်၎င်း၏လှပမှုကိုစူးစိုက်ကြည့်ရှုရန်မြင်တွေ့ရမည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Arc de Triomphe၊ မြင့်မြတ်သောနှလုံးသား၏ Basilica နှင့်ငါသည်သင်တို့ကိုအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်သင်၏အသက်တာ၌သင်တို့ကိုမြင်ရဖို့ရှိသည်သောဆိုဒ်များစာရင်းပြုစုနိုင်ပါတယ်။
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားအများဆုံးနှင့်အခြားနေရာများမှာပြင်သစ်ပြီးလျှင်အမေရိကန်ဖြစ်သည်။ သူတို့အတွင်း၌အခြားလူများထက်လူ ဦး ရေထူထပ်သောနေရာများလည်းရှိသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ခရီးသွား it ည့်ကအရမ်းရှင်းပါတယ်။
Times Squareနယူးယောက်ရှိကျော်ကြားသောစတုရန်းသည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်သန်း ၄၀ ကျော်သွားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအလင်းရောင်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသဖြင့်၎င်းကိုမဖြစ်မနေရပ်တန့်စေသည်။
Central Park: မန်ဟက်တန်၏ဗဟိုတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရုပ်ရှင်များစွာတွင်ပင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသောဤဥယျာဉ်ကြီးကိုတွေ့ရသည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် ၃၅ သန်းခန့်သည်၎င်း၏လှပမှုနှင့်ကြီးမားမှုကိုမြင်တွေ့ရသည်။
Las Vegas မှဖြေ။ Las Vegas မှာလက်ထပ်ဖို့ဘယ်သူမှအိပ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ကြဘူးလား။ သံသယမရှိဘဲ, အရှိဆုံးလေးစားဖွယ်နေရာများအခြား။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာမကလောင်းကစားရုံများ၊ မှော်ဂိမ်းများသို့မဟုတ် Grand Canyon သို့သွားရောက်နိုင်ခြင်းအတွက်ပါ။
ဘော်စတွန် - မြို့ကြီးသည်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များစွာရှိသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Cheers စားသောက်ဆိုင်နှင့်၎င်း၏ကောင်းမွန်သော gastronomic ကမ်းလှမ်းမှုကိုမမေ့ပါ။
ဆန်ဖရန်စစ္စကို - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအများဆုံးလည်ပတ်မှုအများဆုံးမြို့များ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းထားသည့်အရာအားလုံးအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောအရာအားလုံးကိုကြည့်ရှုရန်ဝေးလွန်းသောခရီးကိုသွားစရာမလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
LA ကဖြေ - ကျွန်တော်တို့ Los Angeles ကိုမေ့လို့မရဘူး။ တောင်တန်းများ၊ ခရီးသွား attractions ည့်ဆွဲဆောင်များ၊
စပိန်၌တည်ရှိ၏ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများလာရောက်လည်ပတ်သူများ၏တတိယနေရာ။ ဒီအတွင်းမှာပဲငါတို့ရှိသမျှသည်အရသာများအတွက် ဦး တည်ရာရှိသည်။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များသည်ဟောကိန်းများကိုထိပ်ဆုံးနေရာများအဖြစ်ကော်ရာဒိုဗလီ၊ Granada ရှိ Alhambra နှင့်ဘာစီလိုနာရှိ La Sagrada Familia ကိုရွေးချယ်ကြသည်။ Seville နှင့် Reales Alcázaresတို့သည်ပြင်းထန်သောအလည်အပတ်ခရီးအတွက်အလွန်ဝေးကွာလှသည်။ မြောက်ဘက်တွင် Santiago de Compostela ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်ဘုရားဖူးများနှင့်အနုပညာချစ်သူများအတွက်အစည်းအဝေးနေရာဖြစ်သည်။ Segovia ၏ Aqueduct (သို့မဟုတ်) Burgos ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားနေရာများဖြစ်သည်။